Times Of Nepali » कस्तो अचम्म २७ बर्षदेखि पुरुष नभएको गाउँमा सबै महिला गर्भवति
४ चैत्र २०७५ |
कस्तो अचम्म २७ बर्षदेखि पुरुष नभएको गाउँमा सबै महिला गर्भवति
विश्वमा पतिपत्नीको सम्बन्धलाई सबैभन्दा पवित्र नाता मानिन्छ । त्यसमाथि नेपाल तथा भारतमा त सात जन्मसम्मको सम्बन्ध भएको विश्वास गरिन्छ । हाम्रो देशमा विवाहपूर्व गरिने शारीरिक सम्बन्धलाई समाजले हालसम्म स्वीकारेको छैन ।
काठमाडौं डेली विवाहपछि महिलाको जीवन खुसीले भरिपूर्ण हुन्छ अझ धेरै खुसी त उनी आमा भएको बेलामा हुन्छ । त्यसैले आमा बन्नका लागि महिला तथा पुरुषको शारीरिक सम्बन्ध अनिवार्य हुन्छ । किनकि यो प्राकृतिक नियम नै हो । अहिलेको वैज्ञानिक युगमा पुरुषविना महिला आमा बन्न सक्दिनन् ।
पुुरुषको शुक्राणु र महिलको रजको मिलनबाट नै बच्चाको जन्म हुन्छ । तर, विश्वमा यस्तो गाउँ भेटिएको छ जहाँ पुरुष विना नै महिला गर्भवति भइरहेका छन् । तपाईंलाई यो खबरले पक्कै पनि अचम्ममा पारेको होला । तपाईं मात्र होइन यो खबर सुन्ने सबै अचम्ममा परेका छन् । यो खबर हो, केन्याको ।
समबुरुको उमोजा भन्ने गाउँमा विगत २७ वर्षदेखि कुनै पनि पुरुषले पाइला टेकेका छैनन् । तैपनि, यो गाउँका महिला लगातार गर्भवती भइरहेका छन् र आफ्नो परिवारको विकास गरिरहेका छन् । यस ठाउँलाई चारैतिरबाट काँडे तारले घेरेर राखिएको छ । केन्याको यो गाउँ विश्वको रहस्यमयी गाउँको रूपमा चिनिन्छ ।
त्यसैले यस गाउँमा पुरुष जानका लागि प्रतिबन्ध गरिएको छ । काठमाडौं डेली यो गाउँ सन् १९९० मा १५ जना महिला मिलेर बसाएका थिए । यी १५ महिला सन् १९९० मा ब्रिटिस सैनिकबाट बलात्कृत भएका थिए । त्यसैले उनीहरूले नै यो ठाउँमा पुरुष प्रतिबन्ध गराएका थिए ।
प्रकाशित मिति ४ चैत्र २०७५, सोमबार १९:२५
एकाएक अमेरिकन आर्मी किन आए नेपाल ?
कमेन्ट गर्नु भन्दा पहिले एकचोटी पढिदिनु होला
म १७ वर्षीया अविवाहित यु’वती हुँ, म सङ्ग प्रेम गरि ………..
एसियाको कुनै पनि देशमा नभएको जनावर नेपालमा, एउटैको मूल्य ७ लाख ( भिडियो हेरौ)
रमेश प्रसाई र भाग्य न्यौपानेले १३ लाख बोकेर स्नेहा काख पुग्दा चल्यो रुवाबासी (भिडियो)
चर्चित गीत गलबन्दीमा बेहुला बेहुलीको ऐतिहासिक डान्स, हेर्ने हरुको घुइचो (भिडियो सहित)
प्रचण्डले २० अर्ब भ्रस्टाचार गरेको थाहा पाएर माओबादी पार्टी छोडेको हुँ : बाबुराम भट्टराई -(हेर्नुस् भिडियाे)
यी अधिवक्ता, ज’सले ३० हजार ज’नप्रतिनिधीको मा’सिक त’लब रो’क्का ग’रे
तिहार नजिकैदै गर्दा फेरि दर्शक रु’वाए प्रकाश सपुतले (हेर्नुस् भिडियो )
यसकारण नेपाल लोक स्टारमा शनि बिकले हारे
प्रचण्डका ३ हजार कर्मचारीलाई ओलीले हटाएपछि…
ज्ञानेन्द्रलाई चुनाव लड्न भट्टराईले दिए चुनौती
अब म प्रधानमन्त्री भए भने नेपाल युरोप भन्दा विकसित हुन्छ : डा. भट्टराई
हा’तहतियार सहित जङ्गलमा बै’ठक बसिरहेको अ’वस्थामा ‘विप्लव’ दाईसहित २१ जना प`क्राउ
सीको स’न्देश : ‘देश कसैले ब’नाई दिँदैन, आफै ब’नाउनुपर्छ’
जब प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणले कांग्रेसको चियापान समारोह हू’टिंगले गुंजियो – हेर्नुहोस् भिडियो
ताजा अपडेट : महराले दिय राजिनामा / पढ्नुहोस।
महरालाई ब*लात्कारको आ*रोप लागेपछी नेकपामा खै*लाबैला , प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच छ*लफल हुँदै !
एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो काम गरेपछि च*कित परे गौतम, यसो भने गौतमले